Nkwenye mmekọahụ na di na nwunye | Bezzia
Maria José Roldan | 25/10/2021 22:29 | Mmekọrịta
Mkparịta ụka na mkparịta ụka na-adị mkpa mgbe a na-ekwu maka di na nwunye ma ọ bụ mmekọrịta. N'ihe banyere iso onye a hụrụ n'anya na-enwe mmekọahụ, nkwurịta okwu ahụ e hotara n'elu na-aghọwanye ihe dị mkpa karị. A maara nke a dị ka nkwenye mmekọahụ ma na-eweta ọtụtụ ihe dị mma na mmekọrịta ahụ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ahọrọ ịwụpụ nzọụkwụ a, Anyị na-akọwa mkpa nke nkwenye mmekọahụ maka ọdịnihu dị mma nke di na nwunye ahụ.
1 Gịnị bụ nkwenye mmekọahụ
2 Kedu ihe kpatara nkwenye mmekọahụ na di na nwunye ji dị mma?
3 Otu esi etinye nkwenye mmekọahụ n'omume
Gịnị bụ nkwenye mmekọahụ
Anyị ga-amalite site n'igosi na nkwenye bụ ụdị nkwurịta okwu n'etiti ndị mmadụ nakwa na e ji mara ya site n'igosi mmadụ abụọ ahụ nkwanye ùgwù dị ukwuu. Daalụ maka nkwuwa okwu dị otú ahụ, onye ahụ nwere ike ikwupụta mmetụta ya na ihe ọ chọrọ n'egbughị oge na ịkwanyere ndị ọzọ ùgwù.
Ọ bụrụ na a na-ebuga ya na ụgbọ elu mmekọahụ, akụkụ nke ọ bụla na-ekwu ihe ha chere na nke a na-eme ka oge na-enwe mmekọrịta chiri anya na di na nwunye ahụ, bụrụ ihe na-akwụghachi ụgwọ karịa na ịba ụba n'ụzọ ọ bụla.
Kedu ihe kpatara nkwenye mmekọahụ na di na nwunye ji dị mma?
Isi ihe mbụ a ga-eme ka ọ pụta ìhè bụ n'ihi na nkwuwa okwu dị otú ahụ na-enye aka ịtọ usoro ókè n'ihe banyere mmekọahụ. Ọ dịghị onye a pụrụ ịmanye ime ihe ọ na-achọghị ma ọ bụ ihe ọ na-achọghị. Nkwenye mmekọahụ na-enye onye ọ bụla ohere ịnakwere usoro omume mmekọahụ na inwe ike ịjụ ndị ọ na-achọghị kpamkpam.
Ihe ọzọ dị mma nke nkwenye mmekọahụ bụ na ekele ya. a na-eme ka mmekọahụ na-atọkwu ụtọ. Inwe mkparịta ụka n'ezoghị ọnụ na nke na-emeghe na-enye gị ohere inwe mmekọahụ na onye gị na ya na-enwe mmekọahụ karịa. Ọtụtụ n'ime nsogbu ndị di na nwunye taa, bụ n'ihi n'eziokwu na ọ dịghị ezigbo nkwurịta okwu n'etiti ha, nke na-egosipụta n'ụzọ na-adịghị mma na akwa.
Nkwenye mmekọahụ na-enye gị ohere ịmepụta na ịnwale ihe ọhụrụ n'ime mmekọrịta mmekọahụ, ihe na-eme ka mmekọrịta ahụ dịkwuo mma. I kwesịghị ịdaba na usoro ihe omume, ebe ọ bụ na nke a na-ebute ụfọdụ ike ọgwụgwụ nke na-emetụta di na nwunye na-adịghị mma.
Otu esi etinye nkwenye mmekọahụ n'omume
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe gbagwojuru anya na tiori, nke bụ eziokwu bụ na ọ naghị esiri ike itinye nkwenye mmekọahụ a n'ime di na nwunye ahụ:
Onye ọ bụla nweere onwe ya ikpebi ihe ọ chọrọ na ihe ọ na-achọghị. Inwe onye mmekọ ma ọ bụ imikpu na mmekọrịta abụghị ihe ngọpụ iji leghara ikike a anya.
Enwere ike itinye nkwenye mmekọ nwoke na nwanyị, ma ọ bụrụhaala na onye ahụ nwere ezigbo nchekwa na ntụkwasị obi na onye ya. Enweghị ùgwù onwe onye bụ onye iro kpọmkwem nke nkwenye mmekọahụ.
Anyị ga-ewepụrịrị nkwenkwe ụgha na ihe mgbochi gbasara mmekọahụ na gosi n'ihu ọha ụfọdụ n'ihu di na nwunye ahụ.
Omume dị mkpa na isi mgbe ọ na-abịa n'ịkwado mmekọ nwoke na nwanyị gị. Na mbụ ọ nwere ike isiri ike, mana ka oge na-aga, ihe ga-akawanye mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Nkwenye mmekọahụ na di na nwunye